सावधान ! बुढो हुने एप चलाउदा लिक होला मोबाईलमा भएका सबै गोप्य फोटो भिडियो – Nepal Trending
On २ श्रावण २०७६, बिहीबार १३:१२
काठमाडौं । अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा एप भाइरल भैरहेको छ । मानिसहरुले ‘म भविष्यमा कस्तो देखिन्छु’ भन्दै धमाधम तस्बिर शेयर गरिरहेका छन् । भाइरल एप ‘फेसएप’ ले मानिसलाई उनीहरुको अनुहारको हाउभाउ, लुक्स र भविष्यको अनुहारको नक्सा पनि हेर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । तर यो कत्तिको सुरक्षित छ त ?
अहिलेसम्म १० करोड बढीले गुगल प्ले स्टोरबाट ‘फेसएप’ एप डाउनलोड गरिसकेका छन् । एप एन्नीका अनुसार, यो एप आईओएस एप स्टोरमा १२१ देशमा पहिलो नम्बरमा छ ।
‘फेसएप’ को सेवाका शर्तहरु अनुसार, यो एपले प्रयोगकर्ताको फोटोलाई चाहेको समयमा जसरी पनि उपभोग गर्नसक्छ । यो एपसँग कहिल्यै पनि समाप्त नहुने र अपरिवर्तनीय रोयल्टी–फ्री लाइसेन्स छ, जसको माध्यमबाट कम्पनीले जे पनि गर्नसक्छ र जोकसैको अगाडि गर्नसक्छ ।
‘फेसएप’ ले तपाईँलाई सधैँ, अपरिवर्तनीय, कुनै पनि प्रशंसनीय, रोयल्टी–मुक्त, विश्वभरि, पूर्ण रुपमा प्रयाेगसहित, हस्तान्तरण गर्न मिल्ने लाइसेन्सको उपयोग गर्न, पुनः पेस गर्न, संशोधन गर्न, प्रकाशित गर्न, अनुवाद गर्न, वितरित गर्न, सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन गर्न सक्छ । उपयोगकर्ताको सामग्री र नामलाई चाहे अनुसारको प्रयोजनमा लागू गर्न सक्नेछ । तपाईँको सम्पूर्ण जानकारी (तस्बिर, जानकारी) सार्वजनिक गरिन्छ ।
‘फेसएप’ ले वास्तवमा काम गर्नका लागि यसले तपाईँको सबै तस्बिरसम्म अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर पृष्ठभूमिमा पनि फेसएपले काम गरिरहेको हुन्छ र तपाईँले प्रयोग नगरेको समयमा पनि यसले तपाईँलाई उपयोग गरिरहेको हुन्छ ।
‘फेसएप’ आजकाे भाेलि नै तपाईँलाई हानी पुर्‍याउने काम त गर्दैन तर पनि तपाईँले दिएका व्यक्तिगत सूचना र जानकारीकाे गलत प्रयाेग नहाेला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन ।